टुप्पी - गोविन्द बेल्वासे | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home गृहपृष्ठ प्रवासको साहित्य गद्य (प्रवास) टुप्पी – गोविन्द बेल्वासे
टुप्पी – गोविन्द बेल्वासे
on: जेष्ठ २७ , २०७८ बिहीबार- ०३:२७
इतिहाँसमा पनि राजनैतिक इगो पालेका चाडक्यले मगधको सिंहाशनमा बसेका राजाका विषयमा पनि शिखा (टुप्पी) खुलै राख्ने कसम खाएका थिए । इगो पुरा भएपछि मात्र शिखा बाँध्छु भनेर कसम खाएका थिए । सम्राट धनानन्दलार्इ राजगद्दिबाट फाल्नु उनको इगो थियो ।
खासमा नियम अनुसार त टुप्पी भनेको गार्इको खुर बराबरको साइजमा हुनु पर्छ भन्छन् । तर, म जान्ने हुँदासम्ममा कालिदाशको क दुब्लाए जस्तै टुप्पी दुब्लाएर गार्इको खुर आकारबाट ट्रान्जिस्टरको एरियल जस्तो भैसकेको थियो । नाममात्रको धर्सो मात्र बचाएको हुन्थेँ ।
स्कूलतिर बाटै अङ्गेजी सिक्षातिर लगाव र संस्कृत शिक्षातिर वितृष्णा जगाइएको थियो । त्यसैको प्रभावले होला मनमा भने टुप्पी मोह छँदापनि थिएन । ‘टुप्पी छैन यसको’ भन्ने नपरोस भन्नलार्इ बरू अलि लामो कपाल पाल्ने धुन थियो । तर, अलि कपाल बढ्यो कि “जा कपाल काट” भनेर पठाइ हाल्ने घरबाट । कपाल काटाएर आयो, अलि छोँटो नगराएकोमा टोकसो पाइहालिन्थ्यो ।
नेपालको राजनीतिमा पनि टुप्पीको महत्व त्यस्तै नै छ । पार्टीमा ओलीले आफ्नो हैसियत पनि टुप्पी सरह नै बनाएका छन् । ठाडो शीर हुने मान्छेको उचाइ नै टुप्पीसम्म मात्रै त हुन्छ । त्यसभन्दा माथि सिमाना नै सकिन्छ । त्यसैले टुप्पीभन्दा पनि अग्लो कद बनाउन खोज्नुलार्इ अधोगति मानिन्छ । भलै त्यो गति मोटरगाडीको जस्तो तीब्र नभएर बयल-गाडाको जस्तै धिमा नै किन नहोस ।
बैलगाडाको गति भनेको काजु कान्छालार्इ गणतन्त्रको गन्तब्यको लक्ष्य हासिल गर्न मन परेको गति हो । काजु कान्छा भनेको गणतन्त्रको लडाइ लड्दा रत्नपार्कमा काजु खाँदै परपर तर्कँदै हिँड्ने गरेकाले लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले जानेरै ओलीका लागि राखिदिएको नाम हो ।
यो टुप्पीलार्इ टुपी भने पनि हुन्छ । टुपीलार्इ उल्टायो भने “पीटु” हुन्छ । त्यसैले बयलगाडाको गति मन नपर्नेहरूले टुपीलार्इ उल्टाउन मन गरेको पनि नभेटिएको भने होइन । तर अहिलेको परिस्थितिमा सुरक्षा कवच तोडेर टुप्पीलार्इ उल्टाउन खोज्नेहरूलार्इ सजिलो भने छैन ।
टुप्पी त छाप-गाउँका कान्छा सार्कीको पनि लामै थियो । मैले सम्झने सबैभन्दा राम्रो टुप्पी उनकै थियो, लामो न लामो । आजभोलि त टुप्पी पाल्ने चलन पनि हराउँदै गएको छ । म सानो छँदा हाम्रो गाउँतिर टुप्पी नभएका कि त जोगी हुन्थे, कि त मुसलमान मात्र हुन्थे । क्रिश्चियन भन्ने त मैले सुनेकै थिइनँ । बुद्ध धर्म हिन्दूकै शाखा भनेर बुझाइएको थियो । विष्णुका दशौँ अवतार । अरू सवैले टुप्पी पालेकै हुन्थे । धेरै जसोको टोपीले टाउकोको सिमाना तोकेको घेरालार्इ नाघेर पनि पछाडिपट्टि टुप्पी झुण्डिएको हुन्थ्यो । अहिले लिपुलेक-लिम्पियाधुरासम्मको भागले नेपालको नक्साको सिमाना नाघेको जस्तै भनेर तुलना गर्न पनि सकिन्छ ।
महाकाली सन्धी गर्दा पनि काजु कान्छाको झेल्लि खेलको खुवै चर्चा चलेको थियो । उनकै कारण कालापानी टोपीको घेरा बाहिर झुण्डिएको झुण्डै छ पनि भन्छन, जान्ने बुझ्नेले । कसैकसैको टुप्पीले त्यो घेरा तोडेर दयाँ वा वायाँतिर पनि झुण्डिएको हुन्थ्यो । त्यो घेरा तोड्ने टुप्पीलार्इ नयाँ चुच्चो परेको ढर्लक्क ढल्केको ढाका टोपीको घेरा हो कि, गाउँकै दर्जीले हातेकल घुमाएर सिलाएको एउटै रङ्गको खुइलेको टोपी हो भन्ने कुरासँग कुनै महत्व हुन्थेन । टोपी नयाँ राम्रो भए पनि झुत्रो मैलो भए पनि सहजै घेरा तोडिदिन्थ्यो ।
मैले पढ्ने समयमा गाइखाने विद्या (अंग्रजी) पढ्नुलार्इ समाजले सहजै स्वीकार गरिसकेको थियो । त्यसैले टुप्पी बानेर नाकमा ढेबरी (टुकी)को कालो धुँवा जम्ने गरी घोक्न परेन । आठ कक्षासम्म लाल्टिन बालेरै पढियो । दिनदिनै साँझमा खरानी हालेर लाल्टिनको सिसा माझ्न पर्थ्यो । कहिलेकाही त्यो सिसा झराम्मै फुटेर ढेबरीको धुवाँ त गजबले खाइयो नि खान त ।
यस्तो चलन देख्दा टुप्पीको गाँठोले धार्मिक नियम तोड्न पाइँदैन भन्ने आदर्श बोकेको हो कि भन्ने पनि भान हुन्छ । टुप्पीभन्दा पनि माथि धार्मिक नियम छ भन्ने विम्ब पनि टुप्पीको गाँठोले झल्काउँछ । कानूनको शासन भनेको कानूनले बाँधेर राख्ने हुनाले कानूनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन भने जस्तै धार्मिक नियममा सवै बाँधिनु पर्छ भन्ने शिखाबन्धनको मर्म हुनु पर्ने हो । त्यसैले धनानन्दलार्इ मगधको राजगद्दिबाट फाल्न धार्मिक नियम उलंघन हुनसक्ने अवस्थालार्इ पनि स्वीकार गर्न चाँडक्यले टुप्पीको गाँठो फुकाएको अर्थ लाग्न पनि सक्छ ।
धर्म र संस्कार नमान्ने कम्निष्टहरूलार्इ केको टुप्पी र शिखाको नियम लाग्ने कुरा भयो र !! तै पनि औलीज्यूले थरमा शर्मा थपेर टुप्पीको फुर्ति दिन छाडेका छैनन् । अङ्गेजी तालमा नाम छोट्याएर खड्ग प्रसादबाट केपीमा बनाए । तर, जात जालाकि भन्ने पिरले थर छोट्याउन भने उनी निकै डराएका छन् । त्यत्तिले पनि नपुगेर टुप्पी अधिकारमा अध्यादेशको ध्वासले चालीस पुगेसी रमाउँला भन्न थालेका छन् ।
तर, कालापानी नेपाली नक्साको टुप्पीबाट बाहिरिएको बाहिरिएकै छ, तैपनि यिनलाइ कुर्सी समाउन चालिस शुत्र समाउन परेको छ । संसद चालिस र पार्टीमा पनि चालिस गरी दुवै ठाउँमा चालिस प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पाउने ठाउँमा संसदीय दलमा मात्र चालिस प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउन पाउने बनाएका छन् । चालीसे गीत बजाएकै छन् ।
गजल – डा. श्यामप्रसाद न्यौपाने
अस्तित्व – लक्ष्मीकान्त पौडेल